Madaxweynaha Kenya oo Mareykanka kala hadlay Ammaanka Soomaaliya | dayniiile.com
Home WARKII Madaxweynaha Kenya oo Mareykanka kala hadlay Ammaanka Soomaaliya
Madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta ayaa kulan la qaatay taliyaha ciidamada Mareykanka Jeneraal Stephen Townsend oo ku booqday aqalka madaxtooyada ee magaalada Nairobi.
Madaxweyne Kenyatta ayaa wadahadalka uu la yeeshay Gen. Townsend, oo ah taliyaha ciidamada Mareykanka ee Afrika, waxa ay ku qotomeen nabadda iyo ammaanka gobolka Geeska Afrika, iyadoo si gaar ah diiradda loogu saaray Soomaaliya.
Madaxweynaha ayaa bogaadiyay iskaashiga ka dhaxeeya Kenya iyo Mareykanka ee ku aaddan arrimaha ammaanka, gaar ahaan la dagaallanka argagixisada.
“Waxaan ka mahadcelineynaa shaqada aan sameynay annaga oo kaashanayna Taliska Mareykanka ee Afrika ee ku saabsan nabadda iyo ammaanka gobolka. Waxaan rajeyneynaa inaan sii wadno iskaashiga,” ayuu madaxweyne Kenyatta u sheegay Gen. Townsend.
Dhankiisa, Gen. Townsend ayaa u xaqiijiyay madaxweyne Kenyatta sii wadida iskaashiga ka dhaxeeya Mareykanka iyo militariga Kenya.
Gen. Townsend ayaa waxaa safarkiisa ku wehliyey Eric Kneedler oo ah sii hayaha safaaradda Mareykanka ee Nairobi halka dhanka Kenya ay ka socdeen taliyaha ciidamada difaaca Gen. Robert Kibochi iyo madaxa adeega dadweynaha Dr. Joseph Kinyua.
Taliyaha ciidamada Mareykanka ee Qaarada Afruka Jeneraal Stephen Townsend ayaa dhawaan himid Magaalada Hargeysa, isaga oo wada-hadallo la yeeshay Madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi sidoo kalena uu buuqday dekadda Magaalada Berbera.
Previous articleAntonio Guterres oo ku dhawaaqay inay kordhinayaan taageerada dowladda Cusub ee Soomaaliya
Next articleCiidamada ATMIS oo Madaafiic saaka ku garaacay degaanka Ceelbaraf
Xildhibaano ka tirsan Golaha wakiilada Somaliland oo gudbiyay Mooshin
CCW oo kulamo looga hadlayay Xaaladda Abaarta ka jirta Dalka la...
Ergayga Madaxweynaha u qaabilsan Abaaraha oo Hay’adaha kala hadlaya Abaaraha